Beesha Caalamka oo Cadaadis Saartay Puntland & Jubaland si ay uga Horyimaadan xil ka qaadistii Khayre! | HalQaran.com
Home Opinion Beesha Caalamka oo Cadaadis Saartay Puntland & Jubaland si ay uga Horyimaadan...
Beesha Caalamka oo Cadaadis Saartay Puntland & Jubaland si ay uga Horyimaadan xil ka qaadistii Khayre!
Qormo (Halqaran.com) – Shirkii Dhuusamareeb iyo xilka qaadistii (ama iscasilaaddii) Raiisul Wasaare Khayre waxay na bareen maah-maah sidii markii hore loo yiqiinay si ka duwan loo bartay.
Maah-maahdaas waxay dhihi jirtay “Shan Beri Shiikh Laguma Noqdo.” Shirkii Dhuusamareeb Farmaajo wuxuu ku ogaaday waxayaabo badan oo uusan Khayre ka ogayn saddexdii sano iyo barkii uu Khayre la shaqaynayay. Taa macnaheedu waxa weeye in Farmajo shantii maalmood oo uu joogay Dhuusamareeb ku noqday shiikh, ama haddii aan si kale u dhigno uu ku bartay Khayre.
Dad badan baa intii muddo ahba ogaa in Khayre uu si labo wajiilenimo ah ula shaqaynayay Farmaajo. Dhinac wuxuu ka muujinayay daacadnimo, dhinacna wuxuu ka watay olole uu kula tartamayo Madaxwaynaha oo ah inuu galay hami siyaasadeed (Political ambition) rabayna inuu isu soo sharaxo Madaxwayane oo la tartamo Farmaajo doorashada 2020-ka. Sidaa awgeedna xilka qaadista RW waxay ahayd wax dad badan ay filayeen.
Eedaymo in Khayre Hoos kala Shaqaynayay Beesha Caalamka, Mucaaradka, iyo Maamul Goboleedyada
Waxaa jiray kala aragti duwanaan ay qabeen Khayre iyo Farmaajo oo ku saabsanayd waqtiga iyo qaabka doorashadu u dhacayso. Waxaa igu maqaal ah in RW Khayre uusan rabin inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah uuna diiday in xataa miisaaniyada dawladda lagu daro lacagtii la isugu diyaarin lahaa qabashada doorasho qof iyo cod ah.
Sidoo kale waxaa dadku isla dhex marayaan in RW Khayre uu xiriir gaar ah si hoose ula samaystay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada, sida Axmed Madoobe, Deni iyo Waare oo uu u sheegay damaciisa siyaasadeed iyo in ay isku dhinac ka soo wada jeestaan oo is taageeraan laakiin aan la shaacin inuu rabo inuu tartamo inta laga gaarayo xilliga doorashada.
Waxaa kale oo la sheegayaa in RW Khayre xiir hoose la lahaa beesha Caalamka, Imaartkuna ay siin jireen lacag iyo xogo ku saabsan siyaasadda, dhaqaalaha, amniga, iyo siyaasiyiinta uu la samayn karo isbahaysi. Lacagta imaaratka waxaa la sii marsiin jiray dawladda Faransiiska.
Waxaa kale jira warar sheegaya inuu RW uu sabab u ahaa isku dhaca Puntland iyo wasaaradda waxabarashada kaas oo looga dan lahaa in la iska hor keeno Farmaajo iyo madaxda Puntland, iyadoo wasiirka waxbarada ee Dawaladda Dhexe uu iska dhigayo inuu fulinayo sharciga u yaal dalka.
Dad kale waxay leeyihiin RW-hu lug buu ku lahaa in 2 jeer dib loo dhigo dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee taal maxkamada Hauge, si uu isagu ula xaajoodo dawladda Kenya, dacawaddana uga soo celiyo maxkamadda, arrintana lagu dhameeyo heshiis hoosaad, haddii uu ku guulaysto doorashada madaxwaynanimada Soomaaliya ee sanadka 2021.
Beesha Caalamku oo Cadaadis Ku Haya Madaxda Maamul Goboleedyada, iyo Mucaaradka
Shirkii Dhuusamareeb markuu dhamaaday madaxdu waxay qireen inay dhameeyeen khilaafaadkii u dhexeeyay ayna dib isugu soo laaban doonaan si ay xal ugu helaan khilaafaadka ka taagan doorashada 2020-ka. Laakiin markii xilaka laga qaaday RW Khayre ayaa beesha Caalamku cadaadis saartay Maamul Goboleedyada Puntland iyo Jubaland si ay uga horimaadaan Xilka qaadista RW Khayre.
Puntland markiiba way cambaaraysay xilka qaadista oo waxay ku sheegtay mid aan sharciga waafaqsanayn. Jubaland iyo Hirshabeelana waxa la filayaa inay dhowaan soo saaraan baaq cambaaraynaya xilka qaadista RW-ha, si loo fashiliyo shirka loogu ballansan yahay inuu ka dhaco Dhuusamareeb 15-ka bisha August.
Xil Ka Qaadistii Khayre Si Sharci ah Ma u Dhacday?
Sida Dastuurka qabyada ah ku qoran, xil ka qaadista RW looma marin hab dhamaystiran oo waafaqsan xeerarka xil ka qaadista RW-ha, laakiin ma aha markii ugu horraysay oo sidaan oo kale ay dhacdo. Deni Dhiig buu ku daadiyay Baarlamanka Puntland si uu xilka xoog ugaga qaado Dhoobo Daareed. Axmed Madoobe si sharci darro ah buu isagu isu soo doortay. RW-hii hore Saacid sidaan oo kale baa xilka looga qaaday. Beesha Caalamkuna midna kama hadlin oo way ka indha saabatay dhacdooyikaan oo dhan.
Si kastaba ka ahaatee, xil ka qaadistii Baarlamanka ka dib, Khayre isagaaba yiri waan is casilay. Haddana waxaa muhiim ah loo baahan yahay in xaaladda la dejiyo, la magacaabo RW cusub oo soo dhisa gole wasiiro dawlad cusub, ka dibna laga shaqeeyo sidii doorashada loogu qaban lahaa sida ugu habboon iyo waqtiga ugu habboon.
Allow Sahal Umuuraha!
W/Q: Axmed Bashir bashir1631@gmail.com
xil ka qaadista Kheyre
Shirkadda YouTube oo bil kasta $100 milyan siin doonta dadka leh muuqaalada ugu daawashada badan
Maamulka G/Banaadir oo ka arrinsaday sugidda Amniga Imtixaanaadka Shahaadiga
Abiy Axmed oo shaaca ka qaaday inay Itoobiya fara-gelin ku hayaan dowlado shisheeye